Jasiiraddan Lamaanaha Aan Is-qabin Ma Booqan Karaan.. Ogow Sabab yaab leh – Filimside.net
Jasiiraddan Lamaanaha Aan Is-qabin Ma Booqan Karaan.. Ogow Sabab yaab leh
February 10, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Jasiiradda badka ay ku fadhido waa 3 hiktar oo qura, waa xarun lagu cibaadayso oo ku taallada gudaha Bali Indonesia, magaceedu waa “Tanah loot” oo la macno ah marka laga eego luqadda maxalliga ah dhul badda ku yaalla.
Dhagaxa jasiiraddan si cajiib ah ayuu u qoran yahay xarun cibaado oo aad u qurux badanna korkiisa ayey ka dhisan tahay.
Jasiiraddan waxey ku taalla xeebta koonfur galbeed ee Bali, waxa uu ka mid yahay 7 xarumood oo la halmaala oo badda ku taalla, Tana luut waxaa la dhisay qarnigii 16aad, si loo sharfo arwaaxda badda, waxaa la aaminsan yahay iney ilaaliyaan mas badeed.
Dhagaxa ay jasiiradani ku dhisan tahay waxa uu qormay waqtiyo kala duwan, maadaama dhagaxaantii kale ee jasiiradda ay gebi ahaanba burbureen.
biyuhu marka ay daggan yihiin dadku waxey jasiiradda ku gaaraan lug. xaruntan lagu cibaadeysto waa goobta dadka ugu badan ay soo gaaraan, sawirro selfie ahna ay iskaga qaadaan, aad bay dadku ugu badan yihiin marka ay qorraxdu soo baxeyso iyo xilliga ay sii dhacayso.
Laakiin marka aad dooneyso inaad aaddo lama sii kaxeysto lamaanaha aad is jeceshihiin ee aad guurka iska dooneysaa, maadama la aaminsan yahay in dadka aan is qabin ee isku raaca ay la kulmayaan dhibaato guurna aaney calaf iskugu yeelan, xiriirkooduna uu burbur ku dambeeyo.
Laakiin jasiiradda muuqaalkeeda soo jiidashada badan ayaa keenaya iney dad badan soo jiidato oo waxwalba ay u huraan.